9 Zvino Jobho akapindura, akati: 2 “Chokwadi ndinoziva kuti ndizvo zvazvakaita.Asi munhuwo zvake angava akarurama sei kana aine mhosva naMwari?+ 3 Kana iye akada kuita nharo naye,+Haangagoni kumupindura mubvunzo mumwe chete pane ine chiuru. 4 Iye ane mwoyo wakachenjera uye ane simba.+Ndiani angaomesa mwoyo kwaari akasakuvadzwa?+ 5 Iye anobvisa makomo,+ zvokuti vanhu havambozivi nezvawo,Iye akaaparadza akatsamwa.+ 6 Iye anoita kuti nyika idengenyeke iri munzvimbo yayo,Zvokuti mbiru+ dzayo dzinodedera. 7 Iye anoudza zuva kuti rirege kupenya,Iye anodzitira nyeredzi,+ 8 Iye ari oga anotatamura matenga+Nokutsika pamusoro pemafungu makuru egungwa;+ 9 Anosika boka renyeredzi reAshi, boka renyeredzi reKesiri,Neboka renyeredzi reKima+ nedzimba dzomukati dzokuMaodzanyemba; 10 Anoita zvinhu zvikuru zvisingagoni kuongororwa,+Nezvinhu zvinoshamisa zvisingaverengeki.+ 11 Tarira! Iye anopfuura pedyo neni asi handimuoni,Anopfuura hake asi handimuzivi.+ 12 Tarira! Iye anobvuta. Ndiani angamudzivisa?Ndiani angati kwaari, ‘Uri kuitei?’+ 13 Mwari haazodzori kutsamwa kwake;+Vanobatsira mudenhi+ vachakotama pasi pake. 14 Zvakadini kana ini, ndikamupindura!Ndichasarudza mashoko angu okutaura naye,+ 15 Iye wandaisazopindura, kunyange kudai ndakanga ndakarurama.+Ndaizoteterera ane mhosva neni kuti andinzwire nyasha.+ 16 Kudai ndaizomushevedza, aizondipindura here?+Handitendi kuti aizoteerera inzwi rangu; 17 Iye anondipwanya nedutu,Oita kuti maronda angu awande pasina chikonzero.+ 18 Haazondibvumiri kufemazve imwe mhepo,+Nokuti anoramba achindizadza nezvinhu zvinovava. 19 Kana paine mumwe munhu anonzi ane simba guru, ndiye iyeye;+Kudai paine mumwe munhu anonzi ane simba rokururamisira, haiwa, ndaizoshevedzwa ini! 20 Kudai ndakarurama, muromo wangu waizonditi ndakaipa;Kudai ndisina chandinopomerwa, iye aizongonditi handina kururama. 21 Kudai ndisina chandinopomerwa, ndaisamboziva mweya wangu;Ndaizoramba upenyu hwangu. 22 Pane chinhu chimwe chete. Ndokusaka ndichiti,‘Iye anoparadza munhu asina chaanopomerwa, nomunhu akaipa.’+ 23 Kudai mafashamo anongoerekana avapo aizongoerekana akonzera rufu,Iye aizoseka kurasa tariro kwomunhu asina mhosva. 24 Nyika yakaiswa muruoko rwomunhu akaipa;+Iye anofukidza zviso zvevatongi vayo.Kana asiri iye, saka ndiani? 25 Uyewo mazuva angu anomhanya kupfuura mumhanyi;+Anotiza, haazooni zvakanaka. 26 Anopfuura sezvinoita zvikepe zvetsanga,Segondo rinokurumidza kubhururukira uku nokoko richitsvaka chokudya.+ 27 Kana ndikati, ‘Regai ndikanganwe kunetseka kwangu,+Regai ndichinje chiso+ changu, ndifare,’ 28 Ndinotya kurwadziwa kwangu kwose;+Ndinoziva kuti hamuzonditi handina mhosva. 29 Ini ndichava akaipa.Nei ndichishanda zvakaoma pasina?+ 30 Kudai ndaigeza nemvura inobva muchando,Ndochenesa maoko angu nedota,+ 31 Maizongondinyudza mugomba,Uye nguo dzangu dzaizondisema. 32 Nokuti iye haasi munhu+ akaita seni kuti ndimupindure,Kuti titongane. 33 Hapana munhu angatitongera mhosva yedu,+Kuti aise ruoko rwake patiri. 34 Ngaabvise shamhu yake pandiri,+Uye kutyisa kwake ngakurege kundityisa. 35 Regai nditaure, ndirege kumutya,Nokuti handina kudaro.